Beesha Caalamka oo lumisay Kalsoonidii Shacabka | KEYDMEDIA ONLINE
Beesha Caalamka oo lumisay Kalsoonidii Shacabka
Waxaa la isla lahaa marka uu muranka meel sare gaaro, waxay Beesha Caalamka qaadan doontoo door dhex-dhexaadnimo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Beesha Caalamka waxay afartii sano ee xukunka Farmaajo lumisay kalsoonidii Shacabka, ee ku aadanaa inay qeyb ka yihiin dib u dhiska dowladnimada dalka.
Waxay ku sifoobeen Wakiiladda Beesha Caalamka eex iyo nin jacleysi, iyagoo la saftay Farmaajo markii ay is qabteen dhinacyada ka fekerka duwan, ee la rabay inay dhexdhexaadiyaan.
Qoraal kasta oo Beesha caalamaka soo saarto tan iyo sanadkii tagey waxaa ku qornaan luuqad adag oo lagu canaanayo, loogu hanjabayo Musharixiinta Mucaaradka oo la leeyahay hadii aad qabataan doorasho aan ahayn mida uu wado Farmaajo waxaan adiinku dareynaa liiska qas-wadiyaasha.
Beesha Caalamka waxay iloobeen inuu dalka leeyahay dastuur sheegaya in afartii sano Madaxweyne cusub la doorto, oo Farmaajo uu ka dhmaaday mudo-xileedkiisa, iyagoo ka shaqeeyay jahwareerka siyaasadee ee dalka.
Farmaajo oo waqtigiisu dhamaaday ayay ku tilmaameen Madaxweyne, waxayna siiyeem maqaam iyo xasaanad uusan lahayn, iyagoo dhanka kale ee kasoo horjeeda ku jiiftay, kana dhigay kuwa xasilooni darro siyaasadeed falkinaya.
Shacabku way ogaadeen hadda in Beesha Caalamka ay qeyb ka yihiin mushkiladda Soomaaliya, islamarkaana aysan doonaynin in dalka horey u socdo, oo ka maarmo taageeradooda danaha ku dhisan.